Waxyaabaha saameeya caafimaadka iyo waxa la sameeyo si loo saxo | Ragga Stylish
Ma taqaanaa waxyaabaha saameeya caafimaadka? Nolol maalmeedka wuxuu leeyahay arrimo badan oo waxyeello u leh jirkaaga.
Aan aragno waxa ka mid ah sababahaas, qaar badan oo si weyn loo yaqaan, halka qaar baa kaa yaabi kara.
1 Hurdad la'aanta
2 Fadhiiso saacado badan
3 Meelo aad u buuq badan
4 Cun aad u badan
5 Ku-xadgudubka khamriga
6 Sigaar cabid
6.1 Maxaa dhacaya markaad joojiso sigaar cabista?
7 Nadaafad darida ilkaha
Ma heshaa nasasho fiican habeen? Qof walba wuxuu la xanuunsadaa hurdo la’aan dhowr habeen sanadkii, dhibaatadu waa marka ay caado noqoto. Waana taas Hurdo la'aantu waxay saameyn xun ku yeelan kartaa caafimaadka dadka.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, Inaad seexan weydo habeenkii waxay kordhisaa halista aad ugu jirto cudurro kala duwan, oo ay ku jiraan dhiig kar, wadne xanuun, iyo kaadi macaan. Waxaa lagugula talinayaa inaad seexato 7-8 saacadood maalintii, inaad fure u tahay tan, inaad dejiso jadwal (sariirta aado oo aad marwalba kacdo isla waqtigaas) iskuna daydo inaadan ka boodin.
Fadhiiso saacado badan
Waxaa jira dad badan oo, baahida dalabaad ee xirfaddooda darteed, maalintii inteeda badan waqti fiican ku qaata hor fadhiista kumbuyuutarka. Cunsurkaani wuxuu saameyn ku leeyahay caafimaadka isagoo yareynaya xawaaraha dheef-shiid kiimikaadka, wax sii kordhiya halista miisaanka culus iyo cayilka. Waxay sidoo kale lala xiriiriyay fursada sii kordheysa ee cudurada wadnaha. Ugu dambeyntii laakiin uguyaraan, waxay waxyeello u yeelan kartaa lafaha iyo murqaha (gaar ahaan kuwa dhabarka, qoorta, iyo garbaha) iyo caafimaadka indhaha.
Maxaad ka qaban kartaa? Haddii aad fadhido saacado badan, waa inaad kudaaweysaa waqtigaaga firaaqada. Sidee? Sida ugu fudud ee dhaqaaqa. Aynu aragno xeelado aad ku dhaqmi karto si loola dagaallamo saameynta xun ee saacado badan la fadhiisto.
Tababar waxa ugu horeeya subaxa hore intaadan shaqada aadin, sida markaad baxdo, waxay u badan tahay inaad ka boodo tababarka.
Isticmaal lugahaaga markasta oo ay fursad kuu soo baxdo maalin kasta (qaadashada jaranjarada halkii wiishka laga qaadi lahaa waa istiraatiijiyad weyn).
Dhammaadka usbuuca ayaa fure u ah kala-goynta iyo dib u soo celinta awoodda, wax aan u dhigmin jimicsiga. Tusaale fiican ayaa ah socodka miyiga, oo kuu oggolaanaya inaad neefsato hawo nadiif ah, xiriir la yeelatid dabeecadda, aadna u kordhiso garaaca wadnahaaga iyo jimicsiga jirkaaga oo dhan.
Meelo aad u buuq badan
Ku dhegeysiga dhagaha si aad u tiro badan toban jibbaar joogto ah waxay kordhisaa halista maqal la'aanta. Qaylada xad dhaafka ah waa mid ka mid ah arrimaha saameynta ku leh caafimaadka ee ay tahay inaad ka feejignaato. Waxaa jira xaalado sawaxanku ka baxsan yahay xakamayntayada, sida marka aad maraysid wadada, halka kuwa kale ay awoodaadu tahay inaad ilaaliso caafimaadkaaga maqalka. Mid ka mid ah kiisaskaas ayaa ah mugga dhagaha, kaas oo lagula taliyay inuusan ka badnaan 75 decibel oo aan waligiis la isticmaalin in ka badan laba saacadood oo xiriir ah.
Cun aad u badan
Dhammaan sababaha saameeya caafimaadka, cuntada shaki la’aan waa mid kamid ah kuwa ugu go’aansan. Way ku habboon tahay in la xakameeyo waxa aad cunayso (the cuntooyinka la baaraandegointa yar) iyo sida ay u ilaalinayso halista cuduro badan, oo ay ku jiraan noocyada kansarka qaarkood. Dabcan, cunida kalooriyaal ka badan inta jirku gubi karo sidoo kale waxay u horseedaa korodh miisaan.
Hubso in qaybahaagu ay yihiin cabirka saxda ah, xitaa haddii loo arko inay yihiin cunno caafimaad leh. Cun cunto caafimaad leh oo noocyo kala duwan leh (miro dhan, miro, khudaar) iyo inaad si tartiib ah wax u cunto ayaa kaa caawin doonta inaad iska ilaaliso inaad jidhkaaga siiso cunto ka badan inta ay u baahan tahay, Maaddaama ay sifiican u qanciyaan rabitaanka cuntada oo ay yihiin ilo xasilloon oo tamar u ah jirka.
Cabbitaannada sida khamriga ayaa faa'iido u yeelan kara caafimaadka, laakiin taxaddar, maxaa yeelay cabbitaanka khamriga xad-dhaafka ah waxay kordhisaa halista cudurro badan. In ka badan laba cabitaan maalintii looma tixgeliyo adeegsi dhexdhexaad ah, oo khatar ku ah xubnaha, gaar ahaan beerka iyo kelyaha. Waxay kaloo sababi kartaa noocyada kansarka qaarkood. Xalka hadii aad khamri cabtaa waa inaad waxyar cabtaa hadii aadan cabinna, waxaa fiican inaadan hada bilaabin.
Waqtigaan la joogo qof kastaa wuu ogyahay sida sigaarku u xun yahay caafimaadkaaga. Saameyntiisa waa mid aad ugu xun ficil ahaan dhammaan xubnaha jirka, kordhinta halista tiro aad u badan oo cudurro ah, laga bilaabo boronkiito iyo sokorow ilaa wadno xanuun iyo kansar.
Maxaa dhacaya markaad joojiso sigaar cabista?
Fiiri maqaalka: faa'iidooyinka joojinta sigaarka. Halkaas waxaad ka heli doontaa isbeddelada wanaagsan ee jirku maro marka sigaarka ugu dambeeya weligiis la demiyo.
Nadaafad darida ilkaha
Nadaafadda ilkaha oo liidata waxay kordhisaa halista cirridka iyo godadka. Laakiin qodobkani saamayn kuma yeesho oo keliya afka, laakiin sidoo kale ayaa lala xiriiriyay dhibaatooyin aad u daran, sida istaroog, wadne xanuun, iyo kaadi macaan.
Maxaa la sameeyaa si loo gaaro nadaafadda ilkaha oo wanaagsan? Furaha ayaa ah in nadiifinta dusha ilkaha iyo meelaha udhaxeeya labadaba. Sidaas darteed, Ujeeddada ugu habboon ayaa ah in la cadaydo ilkahaaga cunno kasta ka dib oo loo nadiifiyo sida ugu badan ee loo baahdo si looga saaro dhammaan bakteeriyada ku harta ilkaha dhexdooda..
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waxyaabaha saameeya caafimaadka